समाचार - एक स्थायी जीवनशैली शुरू गर्नका लागि ips सल्लाहहरू
फोहोर व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षण जस्ता मुद्दाहरूको साथ अब प्रवचनको अग्रभागमा, हामी अब अँगाल्ने र अधिक दिगो जीवनशैलीलाई प्रोत्साहित गर्ने तरिकाहरू खोजिरहेका छौं। र त्यसो गर्दा हामीले छिटो कदम चाल्नु पर्छ। किन? एउटा मुख्य कारण यो छ किनकि यो प्रकाशमा आएको छ कि १ 50 s० को दशकदेखि अहिलेसम्म बनेका सबै प्लास्टिकमध्ये percent प्रतिशत मात्र रिसाइकल गरिएको छ। वास्तवमा त्यस बेलादेखि मानवताले सामूहिक रूपमा .3..3 अरब मेट्रिक टन प्लास्टिक उत्पादन गरिसकेको छ। र सोच्न कि 8..3 अरब मेट्रिक टन मध्ये 74 747 मिलियन मात्र विगत decades दशकमा पुन: साइकल गरिएको छ चिन्ताजनक छ। यस बाहेक, ग्लोबल ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन विगत तीन बर्षमा बढेको छ, जुन गत वर्षa36. billion अर्ब टन अनुमानित रेकर्ड उच्च पुगेको छ। उत्सर्जनमा भएको यो वृद्धिलाई जीवाश्म ईन्धन, वन फँडानी र अन्य कारकहरूको प्रयोगको निरन्तर प्रयोगका लागि श्रेय दिन सकिन्छ।
त्यसोभए बढ्दो वातावरणीय दलदलको सामना गर्दा हामी कसरी ज्वारलाई पल्टाउन सक्छौं? तल दिईएको एक दिगो जीवनशैली अँगाल्ने बारे केही सुझावहरू छन्।
घरेलु उर्जाको प्रयोग घटाउनुहोस्
यो मूर्खतापूर्ण सरल लाग्न सक्छ, तर कम ऊर्जा प्रयोग वास्तवमा कम ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन र एक सफा वातावरण को नेतृत्व गर्न सक्छ। एउटा तरिका तपाईले घरेलु उर्जाको उपयोग लाई कम गर्न सक्नु भनेको तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको कुनै उपकरण र बत्तीहरू बन्द गर्नु हो। यदि तपाईंले कुनै बत्तीहरू वा उपकरणहरू छोड्नुभयो तर तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएन भने, यो स्पष्टतया उर्जाको बर्बादी हुनेछ। वातानुकूलित को उपयोग गर्नुको सट्टा, किन झ्याल खोल्न कोशिस गरे कि उज्यालो हावामा जान दिन? यो ऊर्जा संरक्षण र परिणामस्वरूप वातावरणीय संरक्षण को मामला मा लामो यात्रा गर्न सक्छ। अन्तमा, फ्लोरोसन्ट वालेसँग गरियाना प्रकाश बल्बहरू बदल्नुहोस्, किनकि उनीहरूले कम उर्जा चाहिन्छ भने र कम तातो उत्पादन गर्दा बराबरको लम्बाइको बराबरी गर्छन् भने।
पुन: बेच्नुहोस् र / वा आइटम दान गर्नुहोस्
जब तपाईंसँग आइटमहरू छन् तपाईंलाई अब आवश्यक पर्दैन, टोपीको ड्रपमा मात्र डिस्पोज गर्नुको सट्टा, तपाईं या त तिनीहरूलाई बेच्न वा अन्य कोहीलाई चन्दा दिन सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूलाई चाहिन्छ। आइटम बेच्न तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन दोहोरो फाइदा हुन्छ; केवल तपाईंले उत्पादको आयु बढाउन सहयोग गरिरहनु भएको हैन, तपाईं त्यो विशेष उत्पादन बेच्नबाट आर्थिक प्रोत्साहन पनि पाउनुहुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं अधिक परोपकारी महसुस गर्नुहुन्छ भने, तब अनावश्यक वस्तुहरूको दानको रूपमा कार्य गर्दछ। कुनै पनि अनावश्यक कपडा, खेलौना वा उपकरण स्थानीय र / वा अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थालाई दान गर्ने विचार गर्नुहोस् जुन उनीहरूलाई खाँचोमा परेकाहरूलाई वितरण गरिन्छ। दिइएको उत्पादको जीवन विस्तार गरेर, तपाईं डिस्पोजेबल वा एकल प्रयोग उत्पादहरूमा निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ जुन ल्यान्डफिलमा समाप्त हुन्छ।
कम डिस्पोजेबल प्लास्टिक आईटमहरू प्रयोग गर्नुहोस्
प्लास्टिकको बूम अघि, व्यक्तिहरू एकल-प्रयोग रेजर, डिस्पोजेबल कटलरी र खाद्य कन्टेनर, र प्लास्टिकको झोला जस्ता त्यस्ता चीजहरूको सपना देख्दैनन्। अब, यो निश्चित छ कि तपाईं कुनै पनि वस्तुको प्लास्टिक संस्करण फेला पार्न सक्नुहुनेछ र यसलाई तुरून्त प्रयोग पछि डिस्पोजल गर्नुहोस्। वातावरणको हाम्रो उपचारबाट आउने धेरै वर्तमान स्वास्थ्य समस्याहरू फोहोरबाट प्रकृतिमा जारी विषाक्त पदार्थहरूबाट लिइएको हो। यहाँसम्म कि फोहोर जुन उचित ढ disp्गले बेवास्ता गरिन्छ र उपचार गरिन्छ, जस्तै ल्याण्डफिलमा, अझै पनि वातावरणमा विषाक्त पदार्थहरू छोड्न सक्छ। त्यसोभए डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुहरू प्रयोग गर्नुको सट्टा, प्राकृतिक सामग्रीबाट बनेको डिस्पोजेबल वा पुन: प्रयोज्य वस्तुहरू किन हाम्रो क्याटलगबाट बाँसबाट बने जस्तो प्रयोग नगर्ने?
तपाईको कारमा कम निर्भर हुनुहोस्
एउटा गाडी यातायातको सब भन्दा सुविधाजनक रूप हो, यद्यपि यदि तपाईं एक्लै चलाउनुहुन्छ भने, तपाईं योगदान दिनुहुनेछ 6.6 मेट्रिक टन CO2 को वातावरण को यातायात बाट प्रति वर्ष वातावरण मा उत्सर्जित। यसले ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनको बहुमत गठन गर्दछ, जुन ग्लोबल वार्मिंगको मुख्य अपराधी हो। तपाईं शहर यातायात र / वा मेट्रो जस्ता सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेर तपाईंको यातायात पदचिह्न कम गर्न सक्नुहुन्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं कि हिंड्न वा साइकलमा जान सक्नुहुन्छ। केवल तपाईंले हिड्ने वा साइकलबाट कुनै उत्सर्जन जारी गर्नुहुने छैन, हिड्ने वा साइकल चलाउने व्यायामको कारण तपाईं स्वस्थ पनि हुनुहुनेछ।
पानीको साथ बुद्धिमान हुनुहोस्
यो स्पष्ट सुझाव जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसको मतलब यो बेवास्ता गर्नुपर्दैन। आखिर, विश्वका धेरै भागहरू छन् जुन डरलाग्दो खडेरी अनुभव गर्दछ, र पम्पि and र तताउने पानीलाई ऊर्जा चाहिन्छ। तपाइँ तपाइँको नुहाउने समय छोटो गरेर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ; तपाईंले आफैलाई सफा गर्न १ 15 मिनेट लिन आवश्यक पर्दैन। -मिनेटको नुहाउने सफा र आफैलाई स्फूर्ति दिन पर्याप्त समय छ। तपाईंले दाँत माझ्ने बेलामा वा भाँडा माझ्ने बेला ट्याप बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यो पानी संरक्षणको लागि एक सरल, तर आश्चर्यजनक प्रभावकारी समाधान हो। अन्तमा, जब तपाइँ तपाइँको धुलाई गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँको फोहोर लुगामा बचत गर्नुहोस् र तपाइँको मेशिनको साथ पूर्ण भार धुनुहोस्, किनकि यसले २ आधा लोडहरू भन्दा कम पानी र उर्जा प्रयोग गर्दछ।
अब जब तपाईलाई थाहा छ तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ अधिक दिगो जीवनशैलीलाई अँगाल्नको लागि, तपाईले आफ्नो कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसो गर्नाले तपाई वातावरण संरक्षणको व्यापक प्रयासमा योगदान दिन सक्नुहुन्छ।
पोष्ट समय: जुलाई १ -20 -२०१२